Olee otu Ntụkwasị obi na Omume Onlinezụta Ihe n'Onlinentanet Na-agbanwe | Martech Zone
Olee otu ntụkwasị obi na omume ịzụta ihe n'ịntanetị na-agbanwe
Thursday, August 28, 2014 Wednesday, April 13, 2016 Douglas Karr
N'ime afọ ole na ole gara aga, ịzụrụ ihe n'ịntanetị agbanweela n'ụzọ dị ukwuu n'ịntanetị. Inwe saịtị tụkwasịrị obi na-aga n'ihu na-abụ isi okwu metụtara azụmahịa ọ bụla yana yabụ ndị na-azụ ahịa na-azụta naanị site na saịtị ha nwere ike ịtụkwasị obi. E gosipụtara ntụkwasị obi ahụ site na asambodo ndị ọzọ, nyocha intaneti, ma ọ bụ ọnụnọ ụlọ ahịa mpaghara. Ka azụmahịa na-aga n'ihu n'ịntanetị, n'agbanyeghị. 40% nke ndị ọrụ glontanetị n’ụwa niile - ihe karịrị otu ijeri ndị ọrụ - azụtala n'ịntanetị. Otu igodo ịtụkwasị obi nwere ike ịbụ ọnụ ụzọ ịkwụ ụgwọ.
Trustedzọ ịkwụ ụgwọ ntụkwasị obi tụkwasịrị obi PayPal, ebe onye ahia ghaghachitere na ahia ugha, nwere ike ime ka mgbanwe di na saiti gi. Ebe ọ bụ na PayPal bụ mba ụwa, ọ na-agbasawanye ntụkwasị obi ndị ahịa iji zụọ ahịa ụwa.
Na nyocha emere n'oge na-adịbeghị anya, Forrester Research Inc. jụrụ ndị na-ere ahịa ọnlaịnụ UK banyere ahụmahụ ha. Nsonaazụ na-egosi na inye PayPal dị ka nhọrọ ndenye ọpụpụ na-ewulite ntụkwasị obi, a na-ahụ ya dị ka ngwa ngwa ma dịkwa mma. Ọbụna na-eme ka azụmahịa dị mfe!
a ozi sitere na PayPal na-enye nghọta n’ime mmụba ebe ndị ahịa na-azụ ahịa si, saịtị ha na-azụ ahịa na ya, yana ihe ndị na-emetụta ọnụọgụ ntụgharị na ntanetị dịka ọsọ ọsọ, ịdị mma na usoro ịkwụ ụgwọ tụkwasịrị obi.
Tags: Nyocha ecommerce 2013ecommerceozi ecommercetụkwasịrị obinyocha nyochaonline ereịkwụ ụgwọ infographicugwo nhaziugwo technologyPaypalstatistatụkwasị obiuk
Douglas Karr Thursday, August 28, 2014 Wednesday, April 13, 2016
Kpachara anya maka ozi ndị ọbịa
Ntị ezughị. Ebumnuche mmekọrịta gị chọrọ 4 Elements maka Successga nke Ọma!